Mon, Apr 23, 2018 | 17:14:18 NST
कतारमा ठूलो घर देखेर कामै नगरी फर्किएँ विदेशको काम र कमाईको बारेमा खासै थाहा थिएन मलाई । जहाज चढेर जान पाइने भएपछि विदेशमा धेरै थोक होला जस्तो लाग्थ्यो । मलाई जहाज चढ्ने रहर पनि सानै देखि थियो । त्यसैले काम गर्न विदेश नै जाने सोच बनाएँ । गाउँको दलालसँग कुराकानी भयो । उनैले मलाई विदेशे पठाउने चाँजोपाँजो मिलाए । कतारमा ट्रेडको काममा जाने निधो भयो । तर म त्यो कामका लागि योग्य चाहिँ थिइन । मलाई केही पनि आउँदैनथ्यो । दलालले ११ सय रियाल मासिक तलव हुन्छ, त्यसमा ओभरटाइमको पैसा पनि आउँछ भनेका थिए । महिनामा ११ सय रियाल भन्दा धेरै कमाइ हुने... पुरा पढ्नुहोस
उहाँहरुका लागि त म ‘डाक्टर साहेब’ भएको छु सर्लाहीकी पार्वती (नाम परिवर्तन) सँधै तनावमा हुने अनि टाउकोमा हात लाएर बसिरहनुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ घरको भित्तालाई देखाउँदै ऊ कालो मान्छेले मलाई हेरिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो । भित्तामा न कोही हुन्थ्यो न कसैको छायाँ नै । त्यसैले छोराछोरीले हाँसेर वास्ता गर्दैनथे । मैले उहाँलाई यस्तै अवस्थामा भेटेको थिएँ पहिलो पटक । श्रीमान पनि हाम्रो घर भएको जग्गा राम्रो नभएकाले यसलाई यसलाई सैतान लागेको भन्नुु हुँदो रहेछ । तर न त्यो जग्गा खराब थियो न त पार्वतीलाई सैतान नै लागेको थियो । उहाँलाई मनो... पुरा पढ्नुहोस
मजदुरको भावनालाई समेट्ने नेतृत्व हुनुपर्छ एनआरएन युएईमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का सदस्य भनेका सार्क मुलुकबाहिर अध्ययन र कुटनीतिक नियोगमा रहने बाहेक अन्य कुनै देशमा २ वर्षभन्दा भन्दा बढी बस्ने जो कोही नेपाली नागरिक हुन् । तर खाडीमा कार्यरत नेपालीको माग भनेको वर्षको १८२ दिन भन्दा धेरै बस्नहरु नेपाली गैरआवासीय नेपाली हो भन्ने हो । यसै अनुसार नै यी देशमा कार्यरत नेपालीले एनआरएनको सदस्यता पाउँदै आएका छन् । यसै परिभाषाले तपाईं हामी जो युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा मध्यपूर्वका खाडीका देश, अफ्रिका जहाँ छौं, सबै गैरआवासीय नेपाली हौं । मान्ने नमा... पुरा पढ्नुहोस
सपना चिहान पुगेपछि जब म सेन्टर फर माइग्रेसन एण्ड इन्टर्नेशनल रिलेसन्स (सिएमआइआर) मा आए म एकदमै उत्साहित थिएँ । सिएमआइआरमा साथीहरुले नेपाली प्रवासी कामदारका अवस्थाको बारेमा बताउनुभयो । मलाई बेग्लै अनुभव त भएको थियो तर मलै त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा देखेको एउटा दृश्यले छक्क बनायो । म र मेरो साथी बसन्त घिमिरे विदेशमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई शव बुझ्नका लागि सहयोग गर्न विमानस्थलमा पुगेका थियौं । विदेश जान ठिक्क परेका निलो टोपी लगाएका केही युवा चनाखो भएर एजेन्टका कुरा सुनिरहेका थिए । युवाको हातमा बोर्डिङ प... पुरा पढ्नुहोस
परदेशमा सोचे जस्तो हुँदैन, जे छ त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्छ विदेश आउने बेलामा काठमाडौंको इमेज म्यानपावरमा अन्तर्वार्ता दिँदाको दिन दिमागबाट हटेको छैन । मलाई अन्तर्वार्ता लिने अरबी नागरिक साउदीबाटै आएका थिए । मलाई अरबी भाषा त आउँदैनथ्यो । अंग्रेजी भाषामै अन्तर्वार्ता दिएँ । क्याफेको काममा कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेका थिए । त्यति बेला अर्को कुरा पनि भनेका थिए । चकलेट कम्पनीको काम पनि हुन सक्छ । तर मलाई रोड क्याफेकै काम मिल्ला जस्तो लागेको थियो । अन्तर्वार्तामा अरबीको कुराले मलाई झन कहिले काम गर्न विदेश पुगांै भैसकेको थियो । रोड क्याफेमा काम गर्न प... पुरा पढ्नुहोस
सम्झना : विदेशमा पीडित भएकाले २७ लाख क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यसरी भएको थियो मैले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी १३ वटा व्यवस्था ‘डिजाइन’ गरेर तयारी अवस्थामा राखेको थिएँ । कुनै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट अचानकै सार्वजनिक गराउने योजना डा. ऋषिराज अधिकारी र मेरो थियो । माघ ११ गते ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी भयो । अघिल्लो दिन नै प्रेस सल्लाहकारको सचिवालयमा प्रेसलाई बोलाउन समेत जानकारी गराइसकेको थिएँ । प्रेसलाई जानकारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ज्यूको सम्पर्क शाखा (कन्ट्रोल)बाट पत्रकार सम्मलेन स्थगित गर्नुपर्ने भय... पुरा पढ्नुहोस
ठगिनबाट जोगिने कुरा सिकाउँदा पैसा खाएर आएको आरोप लगाउँछन् सूचना तथा परामर्श केन्द्र हरिवनमा स्वयमसेवकको काम गर्न थालेको १६ महिना भयो । यो अवधिमा मैले इश्वरपुर नगरपालिका १३,१४ र १५ नम्बर वडामा सूचना दिने काम गर्दै आइरहेको छु । म पनि मलेसिया बसेर आएको हुँ । त्यस बेला सूचना दिने संघसंस्था केहि थिएन । एजेन्टले जे भन्थ्यो त्यहि सूचना हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सूचना रेडियोबाट आउँछ । साथै विभिन्न संघ संस्थाले पनि काम गरिरहेका छन् । मैले गाउँ टोल र समुदायमा घुम्दा चार किसिमको काम गर्छु । विदेशिने युवालाई सुरक्षित... पुरा पढ्नुहोस
पहिले विदेशको रहरले गाउँमा काम देखिन, अब भेटेरिनरी विषय पढ्छु साथीहरु गएको देख्दा मलाई पनि विदेश जाने रहर लाग्यो । विदेश कसरी जाने, के के प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि थाहा थिएन । घरमा बसेर के काम गर्ने, विदेश जाने रहरले हो कि मलाई गाउँघरमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो पनि लागेन । साथीहरुले पनि विदेशको बारेमा धेरै सुनाएका थिए । उनीहरुको कुरा सुनेपछि त मलाई झनै जाने रहर लाग्यो । घरमा कुरा गरें । तर बुवाआमाले मेरो विदेश जाने रहरलाई सुन्न पनि मानेनन् । साथीहरुको लहैलहैमा लागेर अर्काको देशमा नजाउ भनेर गाली गरे । आमाबुवालाई फकाउने कोशिष त गरें तर... पुरा पढ्नुहोस
विदेशमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने जान्न किताब पढ्दैछु अहिले म २२ वर्षको भएँ । नागरिकताका आधारमा भने १८ वर्षको मात्रै भएँ । नागरिकतामा चार वर्ष उमेर घटाएको छ । हिजोआज म मेसनको काम गरिरहेको छु । यो कामबाट महिनाको १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछु । तर पैसा बच्दैन । त्यही भएर विदेश जान पाएँ भने अहिले कमाए जति बचाउन सक्छु कि भन्ने सोचेर विदेश जान लागेको हुँ । घरमा आमाबुवा, तीन जना दिदीहरु हुनुहुन्छ । एक्लो छोरो हुँ । बुवाआमाले मलाई विदेश जा नजा केही भन्नुभएको छैन । म आफैंले विदेश जाने निर्णय गरेको हुँ । हुन त मलाई पनि विदेश जाने रहर त छैन । तर म... पुरा पढ्नुहोस
विदेशमा हराएका परदेशीका परिवारले के गर्ने ? परिवारको सदस्य आफू भन्दा टाढा विदेश जाँदा उसका परिवारका सदस्यलाई यसै त नियास्रो हुन्छ । परदेशी सम्पर्कविहिन हुँदा उसका परिवारका सदस्यलाई ठूला आघात पर्छ । बालबालिकामा शिक्षा र पालनपोषणमा असर पुग्छ । यसैमाथि विदेश गएको व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुँदा उनीहरुको तनाव झनै बढ्छ । परदेशी सम्पर्कविहीन हुने कारणहरु विदेशमा सम्झौता अनुसारको काम र कमाई नहुनु, परिवारमा तनाव र विपत्ति आउनु, जेलमा परेर सम्पर्क गर्न नसक्नु, सडक वा काम गरिरहेको ठाउँमा दुर्घटनामा परेर होस गुमाउनु, कुलतमा फस्नु, कानुनी प्रक्रिय... पुरा पढ्नुहोस
प्रेम विवाह, कुलत, भनेजस्तो कमाइ नहुँदा विदेशमा युवा सम्पर्कविहिन हुन्छन् हामीले प्रवासी नेपालीको क्षेत्रमा काम गरेको धेरै वर्ष भयो । त्यसमा पनि विदेश गएर समस्यामा पर्नेहरुका लागि विशेष रुपमा काम गरिरहेका छौं । हामी विदेशमा गएर सम्पर्कविहिन भएका नेपालीलाई खोजी गरेर नेपाल फर्काउन सहयोग गर्छौं । विदेश गएका आफन्त हराए भन्दै हामीसँग पछिल्ला दुई वर्षमा १२२ जनाका आफन्तले खोजीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । ती मध्ये ६७ जनालाई परिवारको सम्पर्कमा ल्यायौं । सम्पर्कमा आएका तथा परिवारसँग सम्पर्कविहिन भएर विदेशमा भएकाहरुलाई भेटेको आधारमा परदेशीहरु सम्पर्कविहिन हुने कारण एउटा... पुरा पढ्नुहोस
​यसकारण मैले विदेशबाट घरमा फोन गरिन उमेर त भर्खर १८ वर्ष मात्रै पुग्दै थियो । तर घरको जिम्मेवारी बढ्दै गयो । छरछिमेकका छोराछोरीले विदेश गएर कमाउदै थिए । त्यसैले मलाई पनि विदेश जान पाए कमाइन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो । मैले त कोही चिनेको थिइन । त्यसैले बजारमा हुने दिदीले फुलबारीको एकजना महिला चिन्नुभएको रहेछ । उनैले मलाई घरको काममा कुवेत पठाइदिने भइन् । पहिलो पटक पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं गएँ । एक हप्तामै फर्किएर आएँ । अनि दोस्रो पटक त उड्ने गरी गएँ र उडेँ पनि । कुवेत पुग्दा सुरुमा त साह्रै रमाइलो लाग्यो । ठूल्ठूला घर अनि वा... पुरा पढ्नुहोस
​साथीहरुले सीप सिकेर आउँदा राम्रो भनेकाले सोच्दैछु म अहिले दाईसँगै राज मिस्त्रीको काम गर्दैछु । हामी दुई जनाले केही पैसा त कमाउँछौं तर यसले मात्रै के गरिएला जस्तो लागेर विदेश जाने सोचेर पासपोर्ट बनाउन आएको हुँ । मेरा धेरै साथीहरु विदेश गएका छन् । कोही कतार, कोही दुवईमा छन् । कोही त पछिल्लो समय कोरिया पनि गएका छन् । त्यसैले कहाँ जाने भन्ने निधो गरेको छैन । तर पनि विदेश पुगेका साथीहरुले जहाँ आएपनि सीप सिकेर आउँदा राम्रो हुन्छ भनेका छन् । उनीहरुले कम्पनीमा आउँदा भनेका छन् । त्यसैले जहाँ गएपनि सीप सिकेर जाने सोचेको छु । मलाई विदेश जाँदा का... पुरा पढ्नुहोस
खाडीबाट दुई शब्द बाढीपीडितलाई प्राकृतिक विपत्ति जहिले र जहाँ पनि आउन सक्छ । सम्भावित खतराबारे जानकारी लिन त सकिएला तर रोक्न कसैले पनि सक्दैन । नेपालमा दुई वर्ष अघि आएको विनाशकारी भैंचालोबाट राहत नपाउँदै हामीलाई अर्को विपत्ति आइपरेको छ । तराईका अधिकांश भूभाग डुवानमा पर्दा सयौंले ज्यान गुमाए । लाखौं मानिस घरबारबिहिन बनेका छन् । सरकारले यसलाई कसरी समाधान गर्ला त । भैंचालोको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण आयोग बनायो । करोडौ बजेट निकासा गरियो । समस्या समाधानका लागि विभिन्न काम भए । तर बिडम्बना वास्तविक पीड... पुरा पढ्नुहोस
कोरियामा मेरो हैसियत के त ? म जन्मेको देशमा परिवारको साथमै बसेर सपना पूरा गर्न सक्ने भए यति टाढाको देशमा आउने थिइन होला । जिविको पार्जनका लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरियामा मजदुरी गरि जिउन बाध्य प्रवासी मजदुर हुँ म । कोरियामा प्रवासी मजदुरको निम्ति लागु गरिएको इपियसमा कम्पनी स्वइच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन मलाई । सबै निर्णय मैले होइन कम्पनी मालिकले गर्छ । किन कि म कम्पनी सँग त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य छु । मजदुर कानून अनुसार मैले सेवा सुबिधा पाउनु मेरो अधिकार हो । मलाई कम्पनीले पनि रा... पुरा पढ्नुहोस
​एजेन्टले भनेको नमान्दा कतारमा बढी तलव पाएँ मेरो घर रुपाकोट मझुवा गढी नगरपालिका ७ चिउरीडाडाँ हो । गाउँघरमा टेलर्स (लुगा सिलाउने) काम गरेर साधरण जिवन यापन गरिरहेको थिएं । यो कामको कमाईले घर ब्यबहार चलाउन धौ धौ पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएँ । २०५८ सालमा गाउँका साथीहरुसँगै म पनि काठमाडौंतिर लागें । काठमाण्डौमा मेरो साढदाईको साथी राजु बिकले एजेन्टको काम गर्नुहुँदो रहेछ । उहाँ मार्फत बसुन्धाराको एउटा म्यानपावर कम्पनीबाट कतार जाने प्रक्रिया सुरुभयो । उहाँ पनि काम भने यहिँ आफूले गरिरहेकै थियो । लुगा सिलाउने काममा गा... पुरा पढ्नुहोस
छोरीलाई जिस्याएको ठानेर अरबी महिलाले हामीलाई गाली गरिन् भर्खरै कतार आएका थियौं । रहनसहन केही थाहा थिएन । अलखोर भन्ने शहरको भिल्ला नम्बर ५ मा ३५ जना बस्थ्यौं । एक दिन ४/५ जना चार तल्ला माथि छतमा बसेर भुइँतल्लाको किचेनमा खाना बनाइरहेका साथीहरुसँग अलि चर्को स्वरमा कुरा गरिरहेका थियौं । यत्तिकैमा पारिपट्टिको छतमा रहेकी एउटी केटीले अरबी भाषामा हामीलाई झपार्न थाली । उसले सम्झिछ कि हामीले उसलाई जिस्क्याउँदै छौं । रिसले भुत्भुताउँदै तल झरी । फेरि उसकी आमा छतमा आएर गाली गर्न पो लागिन् । गालीले सातोपुत्लो उडेर हामी तल भुइँतल्लामा झर्‍यौं । हा... पुरा पढ्नुहोस
सेनाको जागिर छाडेर साउदी र मलेसियाको रोजगारीमा आउने मन होइन् म नेपाली सेनामा भर्ती हुँदा संकटकाल थियो । २०६१ माघ ५ गते धरानको फुस्रेमा रहेको श्री भवानी दल गुल्मले लिएको परीक्षा पास गरेर सेनामा भर्ती भएको थिएँ . तालिमका लागि सप्तरीको राजबिराजमा रहेको श्री आर्टिलरी गणमा परेको थिएँ । चैत वैशाखमा एकदमै गर्मी थियो । तर पनि तालिम त गर्नु नै पर्ने । ७ महिनाको सैन्य तालिम सफलतापूर्वक पूरा गरें । सेनाको बर्दी लगाउने र हतियार बोक्ने ठूलो रहर थियो, जो पूरा भयो । तालिम सकिएपछि पल्टनले ३/४ दिनको घर बिदा दिएको थियो । तर संकटकालका कारण घर जान सकिन । त्यो बि... पुरा पढ्नुहोस
६ महिनाको तलब खाएर साथी टाढिए, घर पठाउन लागेको पैसा लिएर अर्का साथी नेपाल पुगेछन् परदेशको दुःख कसलाई सुनाउनु । ‘आमाले फोनमा बाबु काम कस्तो छ’ भनेर सोध्दा एसीमा बसेर गर्ने काम हो भनेर ढाँट्नु पर्ने । आमालाई यसो भनेर ढाँट्दा कहिले त आँशु आउँछ । बोल्दा बोल्दै धेरै पटक रोएको छु । घरको समस्याकै कारण कमाउन परदेशिएँ । यहाँको बास्तविकता कसरी बताउँ । मन बलियो पारेर राम्रै छ भन्नु पर्छ । परदेशिएका धेरै छोराले यस्तै भन्छन् होला । सपना धेरै हुन्छन् । अनगिन्ती सपना पूरा गर्न त हो घर छाडेको । तलव आउने बेला भएपछि अनेकौं योजना बनाउँछु । तिनै योजना र सपनाले नै काम गर्न उर्जा दि... पुरा पढ्नुहोस
कार्यवाहक राजदूतलाई प्रश्न : मानव तस्करको संरक्षण मात्रै गरेको हो कि साझेदारी पनि छ ? भिजिट भिसामार्फत युएईमा नेपाली युवालाई ल्याएर अलपत्र बनाउने क्रम बढिरहेको छ । समस्या समाधान हुनुपर्नेमा बढिरहेको छ । नबढोस् पनि कसरी । युएईमा रहेको नेपाली राजदूतावासको नेतृत्व गरिरहेका कार्यवाहक राजदूत नेत्रबहादुर टण्डनले सार्वजनिक रुपमै दलाललाई कारवाही गर्न सकिन्न भनेर उद्घोष गरेपछि समस्या समाधान होला भन्ने आशा मरिसकेको छ । प्रहरीले चोरलाई समाउन सकिँदैन भन्यो भने चोरको पल्ला कति भारी होला । समाजमा चोरीको अवस्था कति डरलाग्दो होला । युएईमा अहिले झण्डै झण्डै त्यस्तै छ । भिजिट भिसा मात्रै नभ... पुरा पढ्नुहोस